किन खाने रायोको साग ?
एजेन्सी । सरल र सर्बसुलभ रुपमा जहाँ पनि पाईने तरकारीको रुपमा हामी रायोलाई लिन्छौँ । हामीले आफ्नो खेतबारीमा थोरै मिहेनतले पनि फलाउन सक्ने तरकारी पनि हो रायो । विस्तृतमा
यसकारण टुसा उमारेका गेडागुडी खाने
ग्यास्टिकको अचुक औषधि डल्ले खुर्सानी
गिजाबाट रगत आउँछ ? यस्तो छ कारण
यी ४ खानेकुरा सँगै खाँदा ज्यानै जाला
यी चार कार्य गरेपछि स्नान अति आवश्यक छ
काठमाडौं । शिशु जन्मिँदा परिवारमा खुसी छाउने गर्छ । अझ एकसाथ दुई बच्चा जन्मिँदा त्यस्तो खुसी दोब्बर हुन्छ । जुम्ल्याहा बच्चा हुनुका धेरै कारण हुन्छन् ।
एजेन्सी । यदि तपाईको घरमा आयभन्दा बढी व्यय अर्थात् खर्च भइरहेको छ, घरमा कलेश मचिरहेको छ भने बुधवारका दिन बुध ग्रहलाई पुज्नुहोस्, समस्याबाट राहत मिल्न सक्छ ।
सबै भन्दा पहिले गेडागुडी टुसाउनका लागि पानीमा भिजाउनुपर्छ । यसका लागि करीब २४ घण्टा गेडागुडीलाई पानीमा भिजाउनुपर्छ । १२–१२ घण्टामा पखालेर पानी परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
एजेन्सी । खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जसता रोगको औषधी समेत हुन्छ ।
गाउँघरमा गिजासम्बन्धी रोग, दाँत दिइने रोग प्रमुख रुपमा देखा पर्छ, भने शहर बजारमा दाँत किराले खाने र मुखमा नराम्रो खैरा, सेता र राता दाग, धब्बा तथा पत्र देखा पर्छन् । निम्न कारणले गिजाबाट रगत आउँछः
कतिपय खानेकुराहरु खाँदा हामीले होस पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । खानेकुरा खानेमात्र भनेर हुदैन । कुन चिज कहिले खाने के सँग खाने के सँग नखाने यस्ता कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा हामीले खानाबाट बिष पाइरहेका हुन्छौ ।
काठमाडौँ । हिन्दु शास्त्रमा नुहाउनु बाहेक हात खुट्टा धुने समयबारे पनि महत्वका साथ प्रस्ट्याइएको छ । शास्त्रका अनुसार घर पुगेपछि मानिसले जहिले पनि हात खुट्टा धुनुपर्छ । भोजन ग्रहण गर्नुपुर्व र यस पछाडि हात खुट्टा धुनुपर्छ ।
शरीरका यी भागमा कोठी भएकाको हातमा कहिल्यै पैसा टिक्दैन
यी लक्षणहरुलाई बेवास्ता नगरौं, नत्र हुन सक्छ पेटको क्यान्सर
एजेन्सी । पेटमा कुनै पनि कोष असामान्य र अनियन्त्रित तरिकाबाट बढ्नुलाई सजिलो भाषामा पेटको क्यान्सर भनिन्छ । यो पेटको भित्रिपत्रमा फैलिदै विस्तारै पेटको बाहिरी पत्रमा पनि आँउछ । त्यसैले धेरै जसो बिरामीलाई सुरुवातमा पेटको क्यान्सर भएको थाहा नै हुँदैन ।